ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : လေ့လာမှတ်သားစရာ မိန့် ခွန်း (အမေစုကိုတိုက်ခိုက်သူများ အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရန်)
လေ့လာမှတ်သားစရာ မိန့် ခွန်း (အမေစုကိုတိုက်ခိုက်သူများ အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရန်)
တာမွေမြို.နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင် ရုံးဖွင့်ပွဲ.. မိန့် ခွန်းမှ.....
သတိပေးချင်ပါတယ်။ မေတ္တာလည်းရပ်ခံချင် ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်ဖန်တီးရတာပါပဲ..။
ဘယ်သူ.ကိုမှ လက်ညိုးထိုးပြီးတော့.. ပုံပြီးတော့ အပြစ်ဖို.လို.မရဘူး..။
ဘယ်သူကြောင့်..၊ ဟိုလူ.ကြောင့်..၊ ဒီလူ.ကြောင့်..၊ အဖေ့ကြောင့်..
အမေ့ကြောင့်.. မိသားစုကြောင့်..၊ ဆရာ.. ဆရာမကြောင့်..
ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်.. အဲ့ဒီလို လက်ညိုးထိုးပြီးတော့..
အပြစ်ဖို.လို.မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ပဲဖန်တီးသွားရမှာပဲ..။ အဲ့တော့
ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ကိုယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့မွေးကြပါလို.
ကျွန်မလူငယ်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ မွေးလို.ရပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့..၊ ငါတို.ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ ဆိုတဲ့စိတ်တွေမထားပါနဲ့..။
ငါတို.ဘာမှမျော်လင့်စရာ မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေလဲမထားပါနဲ့..။
လူငယ်တွေရဲ့ အရှေ့ မှာ အချိန်တွေအများကြီးရှိ ပါတယ်။ အချိန်တွေကို
အလဟသဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ ကျွန်မတို.ဖက်ကလည်း လူငယ်တွေ
မိမိတို.အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်အောင်လို. ကြိုးစားပြီး တော့
အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးပေးပါ့မယ်။ ဒါဟာကျွန်မ တို.ဖက်ကကြိုးစားရမှာပါ။
လူငယ်တွေက လည်း ငါတို.ဘ၀အတွက် ငါတို.တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့
အင်မတန်မှမွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ကိုမွေးမြူကြပါလို. ကျွန်မတိုက်တွန်း
ကဏ္ဍ လေ့လာမှတ်သားစရာ မိန့် ခွန်း